Xog: Maxay DFS uga noqotay mamnuucistii dabaaldega ciida masiixiga shalay? | Gaaloos.com
Home » News » Xog: Maxay DFS uga noqotay mamnuucistii dabaaldega ciida masiixiga shalay?
Xog: Maxay DFS uga noqotay mamnuucistii dabaaldega ciida masiixiga shalay?
Xukuumadda Soomaaliya ayaa culeys weyn kasoo wajahay amar ay wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo maamulka Gobolka Banadir soo saareen oo ku saabsan inaan magaalada Muqdisho lagu qaban karin xuska ciida masiixiga ee Christmas-ka, oo shalay ku beegneyd kadib markii uu codsi ahaan u soo jeediyay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan.
Title: Xog: Maxay DFS uga noqotay mamnuucistii dabaaldega ciida masiixiga shalay?